Ifulethi - ngesitayela esikhethekileyo - iziko lesixeko
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uHeike iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Thina (isibini saseJamani-eCameroon) sinikezela ngendlu kumgangatho we-2 - amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi kunye nebhalkhoni encinci - kanye embindini weBafoussam. Indlu inomnyango wayo wokungena - ngokuthe ngqo esitratweni, o.k.t ungafika ekhaya lula nangaliphi na ixesha. Kwabo banomdla, sikwanikezela ngeengcebiso kwimisebenzi yokuzonwabisa kwaye sithathe uhambo olukhokelwayo kwindawo ejikelezileyo
Izixhobo zanamhlanje kunye nefenitshala eyenziwe ngabanye ukusuka kwingingqi zinika indlu i-flair ekhethekileyo
Ibekwe kanye embindini-uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya kwimarike enkulu yaseBafoussam, kanye kufutshane “nesithili sokuzonwabisa” esinemivalo kunye neeklabhu (ukutya okunencasa ngamaxesha onke emini nasebusuku), iibhanki ezinee-ATM, isibhedlele kunye ikhemesti ikufuphi nje
indlela elungileyo egangathiweyo; Ungafumana iteksi okanye i-mototaxi kanye ngaphandle komnyango wangaphambili - kodwa zonke iindawo ezibalulekileyo zikwakumgama wokuhamba olula
Indlu yeendwendwe ilungile ecaleni kwendlu yethu yabucala - ke sihlala sifumaneka yonke imihla kwaye sinokufikelelwa ngomnxeba kuyo nayiphi na imeko-siyavuya ukukunceda ngeengxaki okanye ukuba ungathanda umntu ukuba ahambe nawe.
Undwendwe ngalunye lufunyanwa sithi, o.k.t. siqinisekisa ukuba umntu omnye uhlala ekhona kwiimfuno zabo.
Indlu yeendwendwe ilungile ecaleni kwendlu yethu yabucala - ke sihlala sifumaneka yonke imihla kwaye sinokufikelelwa ngomnxeba kuyo nayiphi na imeko-siyavuya ukukunceda ngeengxaki…